तपाईलाई थाहा छ सहवासका लागि सबैभन्दा उचित समय कुन ? महिनामारीको बेलामा किन गरिँदैन ? कुन समयमा गर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ ? हेर्नुहोस् जानकारीमूलक यो भिडियो – Gazabkonews
तपाईलाई थाहा छ सहवासका लागि सबैभन्दा उचित समय कुन ? महिनामारीको बेलामा किन गरिँदैन ? कुन समयमा गर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ ? हेर्नुहोस् जानकारीमूलक यो भिडियो